ko htike's prosaic collection: ပိုက်ဆံပေါ်မှ လွတ်မြောက်ရေးစာသားများ ....ကူညီဖြန်ချီပေးပါရန်
ပိုက်ဆံပေါ်မှ လွတ်မြောက်ရေးစာသားများ ....ကူညီဖြန်ချီပေးပါရန်
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဇန်န၀ါရီ ၂၉ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကျေညာချက် ၂ / ၀၁ တွင် ပါရှိသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများအားခြွင်းချက်မရှိ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ရေးအတွက်တိုင်းသူပြည်သားများက ၀ိုင်းဝန်းထောက်ခံကြရန် ဟူသောတောင်းဆိုချက် ကို ထောက်ခံသောအားဖြင့် ကျနော်တို့ လူငယ်အင်အားစု အဖွဲ့မှ ယခုကဲ့သို ငွေစက္ကူပေါ်တွင်လွတ်မြောက်ရေး စာသားများရေးကာ February နှင့် March လ နှစ်လတိုင်တိုင် တိုက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြည်သူတရပ်လုံးအားပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဖိတ်ခေါ်လိုက်သည်။ပြည်ပ အင်အားစုများအနေဖြင့်လည်း blog ၊ email ၊ phone ၊ radio စသည့်နည်းလမ်းပေါင်း စုံကို သုံးကာပြည်တွင်း သို့ အဆက်မပြတ် ပန်ကြားပေးရန် လည်း ဖိတ်ခေါ်သည်။
Posted by ကိုထိုက် at 06:27
ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) said...
our country can use internet phone to world wide...www.skype.com...www.voipdiscount.com...www.voipstunt.com...www.voipzoom.com...and so on..please tell any body to use it,,,,that can call free call to land line phone for free 36 country and over..
3 February 2009 at 09:30
ကလေး ကုလား ၊ ကြောင်တောင် တောင် အလုပ်တွေပါကွာအလုပ်တွေ ပါကွာ။
heehe whenever they said "it's childish" etc, that means they are afraid that people will actually do it. It is getting their attention!
4 February 2009 at 02:56
10 March 2009 at 07:20
26 March 2009 at 02:43
4 April 2009 at 18:16
13 April 2009 at 13:20